Mmadụ Bịa ka whamine weebụsaịtị!
Wuxi Weiheng Chemical Co., Ltd. bụ a na-eduga soplaya nke amines na emepụta. Arụ ọrụ na ndị ahịa si dị iche iche ọrụ ruo ihe karịrị afọ 15, whamine nwere a kasị saa mbara Pọtụfoliyo nke amines, amides, quats na-eji gafee ahịa dị ka ulo oru ihicha, onye na-elekọta, disinfection, agrochemicals na-emepụta ọgwụ. Whamine ga-anọgide na ya na-agbalị iji ike ya uru na ike uru maka ihe niile ya ahịa, na-agbalịsi ike na-na-esiwanye na-akwanyere ùgwù na tụkwasịrị obi aha.
The mmepe direction nke surfactant ga-gosiri na ndị na-esonụ: 1. ọ na-enyo na-eke; 2. ọ ga-eji dochie-emerụ ọgwụ, 3. ọ ga-asa na-etinye ...
Ọrụ nke Cationic Surfactant - Antistatic Mmetụta
Soft na-eji ire ụtọ Mgbe surfactant ụmụ irighiri na-kwekọọ na n'elu ákwà, ikwu ọnụọgụ nke static esemokwu nke ákwà nwere ike belata. Non-ionic surfactants dị ka linear alkyl polyoxyethylene ethers, linear alkyl ọdụdụ acid polyoxyethylene ethers, dị iche iche cationic surfactants niile belata static frict ...
Ọrụ nke Cationic Surfactant - Solubilization
Solubilization Solubilization na-ezo aka na mmetụta nke surfactant na-amụba solubility nke agụghị oké soluble ma ọ bụ unyi anaghị agbasa na ihe na mmiri. Ka ihe atụ, solubility nke benzene n'ime mmiri bụ 0,09% (olu nta). Ọ bụrụ na a surfactant (dị ka sodium oleate) na-kwukwara, na solubility nke benzene nwere ike mụbara ka 10%. Solubilizat ...